Safal Khabar - यसकारण झर्छ कपाल ?
यसकारण झर्छ कपाल ?
मङ्गलबार, २४ असार २०७६, १४ : २३
काठमाडौं । हिजोआज कपाल झर्ने समस्याले धेरै मानिस तनावमा पर्ने गरेका छन् । विशेषगरी पुरुष कपाल झर्ने समस्याबाट हैरान भएको पाइन्छ । धेरैको गुनासो हुन्छ, मेरो उमेर नै पुगेकै छैन कपाल झरेर केही बाँकी छैन । आखिर किन झर्छ पुरुषको कपाल ? यसका केही वैज्ञानिक यस्ता छन् ।
धूमपानका क्रममा निलिने निकोटिनको कारण पुरुषको रक्तनलीहरू खुम्चिन थाल्छ । रक्तनलीहरू खुम्चन थालेपछि शरीरमा अक्सिजनको मात्रासमेत घट्छ । जसका कारण कपाल झर्छ ।
क्यान्सर, मुटु, उच्च रक्तचाप, डिप्रेसन, मधुमेहलगायत रोग निको वा नियन्त्रण गर्न अनेकौं औषधि खाने चलन छ । मानव शरीरको बनावटअनुसार औषधिको असर पनि फरकफरक तरिकाले देखिन्छ । औषधिको एउटा मुख्य असर कपाल झर्न पनि सक्छ ।
मद्यपान धेरै गर्ने पुरुषको शरीरमा टक्सिन बढ्दा आइरन, जिंक पानीको मात्रामा कमी आउन थाल्छ । जसका कारण पनि कपाल झर्ने समस्या सुरु हुन्छ । जुन धेरैले थाहा नै पाउँदैनन् ।
तनावले अन्य धेरै समस्या निम्ताइरहेका बेला कपाल झर्ने समस्या पनि निम्त्याउन थालेको छ । एक अध्ययनअनुसार तनाव बढ्दा शरीरको हर्मोनमा असन्तुलन पैदा भई कपालसमेत झर्न थाल्छ ।
रसायनयुक्त पदार्थको प्रयोग
बजारमा पाइने अधिकांश रसायनयुक्त कस्मेटिक सामानहरू पाइन थालेको छ । रसायनयुक्त विभिन्न किसिमका हेयर जेल, कलर्स, सेम्फू, कन्डिसनरजस्ता पदार्थको प्रयोग गर्दा कपाल झर्छ ।
पुरुषहरूको कपाल झर्नेको अर्को साझा कारण एन्ट्रोजेनिक एलोपिका हो । शरीरमा डीएचटी हर्मोनको ब्यालेन्स बिग्रिँदा यस्तो समस्या हुन्छ ।
कपाल झर्नु पुरुषको वंशाणुगत कारण पनि हो । विशेषगरी कपाल झर्छ भने त्यो वंशाणुगत कारण पनि हुन सक्छ ।
व्यस्त जीवनशैलीको बहानामा हिजोआज अस्वस्थ खानपानमा बढी ध्यान जाने गरेको छ । त्यसमा पनि पुरुष धेरै छन् । छिटो कपाल झर्नुको कारण अस्वस्थकर खानपान पनि हो । आइरन, भिटामिन ए, प्रोटिन, जिंक, क्याल्सियमजस्ता पौष्टिक तत्त्वको कमीले पनि कपाल झर्छ ।
टाउकोको छालामा कुनै कारणले संक्रमण भयो भने कपाल झर्ने गर्दछ जुन पुरुषमा धेरै हुन सक्छ ।
विभिन्न कारणले चाया पर्ने समस्या पुरुषमा पनि व्याप्त छ । लगातार चाया पर्ने तर समाधानको उपाय खोजिएन भने कपाल झार्न सक्छ । - एजेन्सीको सहयोगमा
दन्त चिकित्सकको सुझाव : बजारमा पाइने झोलले दाँत सफा गर्दै नगर्नूस् (अन्तर्वार्ता)
दाँत पनि मानव शरीरको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । तर दाँतको सुरक्षाका लागि हामी नेपालीहरुले...
कात्तिक २ र ३ गते भिटामिन ‘ए’ खुवाइने
सरकारले कात्तिक २ र ३ गते भिटामिन...
घुँडा खिइने समस्याबाट कसरी बच्ने ?
जोर्नीभित्र यस्ता अन्य धेरै बनावटहरु हुन्छन्, जसले...
सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अर्को अनसनको तयारीमा डा. केसी
चिकित्सा क्षेत्रका बेथितिविरुद्ध पटकपटक अनसन बस्दै आएका...